Iko kune kumanikidza kwakawanda kudzidza kupfuura nakare kose
Vadzidzi vazhinji havawani mazano ekuti vadzidze sei
Iko tsika yakanaka kufunga kuti mamiriro ako ehupenyu angakanganisa sei kudzidza kwako
Maitiro ako azvino ekudzidza anogona kunge asiri iwo anonyanya kushanda
Kune maturusi nehunyanzvi zviripo zvekubatsira iwe kuti ubudirire uye ubudirire mudzidzi
Mune ino posvo tinotsvaga gangaidzo yekudzidza, uye tinokubatsira kuti uone projekiti yako yekudzidza pachako uye maitiro ako azvino ekudzidza.
IVA WANODZIDZA MUDZIDZISI SEMUDZIDZISI KANA KUTI UDZIDZE ZVINOGONESA
Iko kudiwa kwenzira inofungidzirwa yekudzidza iri kudzvanya kupfuura nakare kose. Mufananidzo 1.1 unoratidza kupokana kuri pakati pekukosha kwakanamatira pakudzidza maringe nekushayikwa kweruzivo pamusoro pemaitiro ekushandisa uye maturusi. Pamwe chinokatyamadza ndechekuti vadzidzi vanowanzo kurairwa kuti ‘vaite zvinoshanda’, pasina nhungamiro yekuti vangaziva sei kuti zvinorevei kwavari.
Hurumende yeUK yakazvipira kuwedzera huwandu hwevanopedza kudzidza kusvika makumi mashanu kubva muzana yevane makore gumi nemasere ekubuda chikoro. Zvakadaro iyo UK isingapedze mwero yevadzidzi venguva yakazara kutanga muna 2000-1 yaive gumi muzana uye chikamu chakakura chevadzidzi vane ruzivo kupfuura vadiki vakasiya (HEFCE 2003).
1 Kazhinji zvinoratidzwa tariro uye kutya
2 EDZA IZVI
Kazhinji zvinoratidzwa tariro uye kutya
• Kosi yacho inonakidza uye inosimudzira
Kudzidza kwangu kuchabatsira mune ramangwana
• Ndinonzwisisa zvese
• Kosi yacho ichandidenha
• Kosi yacho yazvino
• Ndichabudirira / ndichapasa bvunzo / kosi
• Ndichagara kusvika kumagumo
• Vaperekedzi vanobatsira uye vanoziva
• Vamwe vadzidzi vane hushamwari uye vanotsigira
• Ndinokwanisa kuwana nguva yakakwana mushure mebasa
• Kosi yacho yakanyanya kuoma
• Ndinozviona zvichifinha
• Ini handizobudirire
• Pachave nezvakawanda zvekuita
• Handizoenderera mberi nevarairidzi
• Handizoenderera mberi nevamwe vadzidzi
• Ndatora sarudzo isiriyo
Tora nguva yekutarisa mamiriro ako ehupenyu. Mibvunzo pano yakagadzirirwa kukubatsira iwe kuita izvi, kunyange uchinzwa wakasununguka kuwedzera mimwe inoita kunge yakakodzera. Wadaro, nyora mhinduro dzako pane isina chinhu mindmap yakatarisana uye tarisa mufananidzo wese. Kudzidza kwako kunoratidzei? Iwe ungasimudzira sei zvinhu zvingangobatsira kubatsira kudzidza uye kudzikisira izvo zvingangotadzise? Nyora zvaunotarisa uye zvinangwa mumabhokisi machena.
Nei ndakasarudza kosi iyi?
Chisarudzo chemushandirwi wangu?
Ndakashaya kuti chiizve chekuita?
Kuronga ramangwana basa?
Zvikonzero zvangu zvinokanganisa kudzidza kwangu?
Ndeipi imwe nguva yekuzvipira yandinayo parizvino?
Zvimwe zvekuzvipira kuzvipira?
Zororo / kuzvipira kuzvipira?
Ndingaite sei kuti ndinyatsobatanidza izvi zvibvumirano nekudzidza kwangu?
Pane here zvingangotadzisa kudzidza zvinobudirira?
Ndiri munyama nepfungwa zvakanaka here?
Ndine ruzivo rwechangobva kuitika rwekudzidza here?
Mumwe wangu / mhuri inotsigira?
Zvipingamupinyi izvi zvinoderedza mukana wangu wekubudirira kusvika papi?
Chii chandinoda kuwana?
Yakagadziridzwa tarisiro yebasa?
Chinangwa changu (s) chingakanganisa sei kurudziro yangu?
Ndezvipi zviitiko zvekudzidza zvandinounza?
Ndeipi nhanho yandakadzidza pairi?
Ndeipi nzira yekudzidza – kupinda, pa-line, kure, kwakasanganiswa?
Ndezvipi zvinorehwa nechirongwa ichi?
Ndezvipi zvandinotenda pamusoro pekudzidza?
Ibasa rakaoma here?
Ini handina kugona pazviri?
Zvinoda kuzvidzora here?
Inguva yakashandiswa zvakanaka here?
Zvitendero zvakadaro zvinokanganisa sei maitiro angu ekudzidza?
Chero chinhu chehurongwa hwako chinogona kuchinja nekufamba kwenguva. Zano redu ndere kupedzisa chirongwa chekudzidza pakutanga kwechirongwa chitsva chega chega chekudzidza, pazvinenge zvichingobatsira kuongorora kuti ‘uripi’. Saizvozvowo, unogona kuongorora purogiramu yako panguva yepurogiramu yakareba yekudzidza, kuti uone kana purogiramu yako ichiri kushanda kana kana pane zvitsva zvitsva.
Kana iwe uchinzwa sekuti mamiriro ako ehupenyu arikukushora, edza kugovera izvi nemudzidzisi wako kana vatungamiriri vechirongwa nekukurumidza kwete gare gare. Ivo vanogona kugona kubatsira, nekupa zvinowedzerwa pabasa rekosi, kana ruzivo rwebhasari, semuenzaniso. Kurwa uri wega kunowanzoita kuti zvive nyore kupedza matambudziko.
MAITIRO AKADZIDZA IZVOZVO
Semunhu akura mudzidzi unounza makore mazhinji echiitiko kune chero chirongwa chitsva chekudzidza. Dzimwe dzedzidzo ‘tsika’ dzinounganidzwa munzira dzingave dzinovaka kupfuura dzimwe! Tichatanga kuyera tsika idzi pano nekudziongorora. Zvino tarisa patafura 1.2 papeji 8. Unobvumirana zvakadii neshoko rimwe nerimwe? Wakawana sei mibvunzo iyi? Zvaive nyore kupindura here? Wati wambofunga nezve nyaya dzacho kare? Ngatitarisei kuti mhinduro dzako dzinorevei.
Isu tinovimba iyi blog-posvo yakurudzira chishuwo chako. Iwo akakosha mapoinzi ekurangarira ndeaya:
• Vadzidzi havawanzogadzirira zvakakwana kudzidza ruzivo rwakawanda rwavanowana
Mamiriro ako ezvinhu anogona kukanganisa kugona kwako pakudzidza
Unogona kunge watove nehunhu hwakaipa hwekudzidza
• Pane maturusi nehunyanzvi zviripo zvekubatsira iwe kuti uve mudzidzi anobudirira.